Mpanakanto iray mampiseho ny olona tsy fantany velively tamin'ny santionan'ny ADN avy amin'ny siligaoma sy bokotra sigara | Famoronana an-tserasera
Mpanakanto iray mampiseho ny olona tsy fantany velively tamin'ny santionan'ny ADN avy amin'ny siligaoma sy ny sigara
Mandeha amin'ny arabe ianao ary sendra vodin'ny sigara, siligaoma na volon-dehivavy. Manontany tena ianao hoe iza no efa teo ary inona ny tantara ao ambadik'io olona io ary tsy izany ihany fa manontany tena ianao ihany koa hoe manao ahoana ilay olona ao ambadik'ireo zavatra ireo. Alao sary an-tsaina vetivety fa azonao atao ny mampiseho ireo olona tsy eo intsony, izay nandalo tamin'ny fomba manokana teo akaikinao ary izay tsy mbola hitanao akory fa nanome aingam-panahy anao tamin'ny dingana nohajainy na fotsiny satria nifanena taminao ianao teboka manokana. Mety ho zava-miafina, hafahafa ary ambonin'izany rehetra manome aingam-panahy. Ity ny fanamby napetrak'ilay mpanakanto Heather Dewey-Hagborg izay nanana hevitra kanto hanehoana olona mbola tsy fantany tamin'ny fakana santionany ADN misy amin'ny vodin'ny sigara sy siligaoma.
Raha vantany vao mandray ny santionany ao amin'ny laboratoara ity mpanakanto ity dia mamakafaka ireo polymorphisms tsotra noteotide izy, tsy mihoatra ny kely noho ny fiovan'ny filaharana ADN, mba hamindra ny angon-drakitra amin'ny programa solosaina izay afaka mandika izany vaovao izany ho tena endrika ara-batana: Avy amin'ny lahy sy ny vavy , firazanana, na lokon'ny maso. Tsy mijanona eo ilay zavatra satria avy eo ny maherifonay dia mamerina mamerina ny sary tsirairay avy mifototra amin'ny fampahalalana nangonina ary manonta azy ireo amin'ny mpanonta 3D. Izany rehetra izany dia niteraka ny andian-dahatsoratra nantsoina Fahitana vahiny o Fahitana olon-tsy fantatra. Eto ianao dia manana santionany amin'ny asany mahafinaritra, saingy soa ihany fa mbola hisy bebe kokoa amin'ny ho avy, satria fantany fa ny valiny dia tsy 100% marina amin'ireo olona tany am-boalohany fa amin'ny ho avy dia kasainy hatao izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Mpanakanto iray mampiseho ny olona tsy fantany velively tamin'ny santionan'ny ADN avy amin'ny siligaoma sy ny sigara
Ny algorithm tokony homena tsiny noho ny fanahafana ny lanezy mahatsikaiky hita ao amin'ny Disney's Frozen
Fisafidianana boky 20 maimaimpoana momba ny taratasy